Iindaba- Malunga neCemented Carbide (I)
Malunga neCemented Carbide (I)
1.Icandelo eliphambili le-Cemented Carbide
I-carbide ene-cemented yenziwe nge-high-hardness, i-refractory metal carbide (WC, TiC) i-micron powder njengeyona nto iphambili, kunye ne-cobalt (Co), i-nickel (Ni), kunye ne-molybdenum (Mo) njenge-binder. Ingasetyenziselwa kwisithando somlilo okanye iimveliso ze-hydrogen Powder metallurgy ezifakwe kwisithando somlilo sokunciphisa.
2. Ukuqulunqwa kwee-substrates ze-carbide enesamente
I-substrates ye-carbide ene-cemented yenziwe ngamacandelo amabini: enye inxalenye yinqanaba lokuqina, kwaye enye inxalenye yintsimbi edibeneyo.
Isigaba esinzima yi-carbide yesinyithi senguqu kwitafile ye-periodic, efana ne-tungsten carbide, i-titanium carbide, kunye ne-tantalum carbide. Ukuqina kwazo kuphezulu kakhulu, kwaye iindawo zazo zokunyibilika zingaphezulu kwama-2000°C, kwaye ezinye zide zidlule kwi-4000°C. Ukongeza, i-nitrides yensimbi yenguqu, i-borides, kunye ne-silicides zineempawu ezifanayo kwaye zinokusebenza njengezigaba ezilukhuni kwi-carbide enesamente. Ubukho besigaba sokuqina bumisela ukuba i-alloy inobunzima obuphezulu kakhulu kunye nokumelana nokunxiba.
Intsimbi edibeneyo idla ngokuba ziintsimbi zeqela, kwaye i-cobalt kunye ne-nickel zisetyenziswa ngokuqhelekileyo.
3.Icandelo ngalinye lisebenza njani kwimveliso
Xa kuveliswa i-carbide ene-cemented, ubukhulu be-particle ye-powder eluhlaza ekhethiweyo yifektri ye-carbide ene-cemented iphakathi kwe-1 kunye ne-2 microns, kwaye ubunyulu buphezulu kakhulu. Izinto eziluhlaza zixutywe ngokomlinganiselo ochaziweyo wokubunjwa, kunye notywala okanye enye i-medium yongezwa ekusileni okumanzi kwi-mill yebhola emanzi ukuze ixutywe ngokupheleleyo kwaye icolile. Emva kokumisa kunye ne-sieving, i-agent yokubumba efana ne-wax okanye i-glue yongezwa. Umxube ufunyanwa ngokuhluzwa. Emva koko, xa umxube uhlanjululwe kwaye ucinezelekile, kwaye ushushu ukuvala indawo yokuncibilika kwensimbi ye-binder (1300-1500 ° C), isigaba esinzima kunye nentsimbi ye-binder iya kwenza i-eutectic alloy. Emva kokupholisa, isigaba esinzima sisasazwa kwigridi ehlanganiswe nentsimbi edibeneyo, kwaye idibaniswe ngokusondeleyo ukuze yenze yonke into eqinile. Ubunzima be-carbide ene-cemented buxhomekeke kumxholo wesigaba esinzima kunye nobukhulu bengqolowa, oko kukuthi, ukuphakama komxholo wesigaba esinzima kunye neengqolowa ezinqabileyo, ubukhulu obukhulu. Ukuqina kwe-carbide ene-cemented kunqunywe yintsimbi yebhondi. Ukuphakama komxholo wentsimbi yebhondi, amandla amakhulu okugoba.
Milling Cutter, IiMill zokuphela kweCarbide, ICarbide enesamente, Carbide Precision Tools, Izixhobo zeCarbide, Isixhobo seCarbide,